Drones - Gadget သတင်းများ Gadget သတင်း
သင်ရှာနေခဲ့လျှင် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်သို့ဖြစ်လျှင်ဤအပိုင်းသည်သင်လိုအပ်သည့်အတိအကျဖြစ်သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ၊ စျေးကွက်ကိုထိမိသည့်မော်ဒယ်သစ်များ၊ စပိန်အတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နှင့်သင်တို့အဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးငယ်ဆုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှသည်အမျိုးမျိုးသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ကား စျေးသိပ်မကြီးတဲ့သုံးစွဲသူများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောမိုးလုံလေလုံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသို့မဟုတ်အခြားမော်ဒယ်များမှတစ်ဆင့်ဈေးကွက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံး
ဒီမှာ နောက်ဆုံးပေါ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သတင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများ Actualidad Gadget တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မင်းတို့သူတို့ကိုမင်းကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Analysis Splashdrone 3+ ကိုစပိန်ဘာသာ၊ SwellPro ၏ရေစိုခံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်သည်
por Miguel Gaton လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား Actualidad Gadget သို့ SwellPro's Splashdrone 3+ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပျံသန်းနိုင်စွမ်းရှိစေပါသည်။
Star Wars မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း
por Miguel Gaton လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
Star Wars Saga ၏ပရိသတ်ကောင်းတစ် ဦး အနေနှင့်ဤမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များစမ်းသပ်မှုသည်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်မောင်းနှင်နေသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အသစ်အားသင်ဆန်းစစ်လေ့လာပါလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အမည်မှာ VR မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်သည်။
GoPro သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး ၀ န်ထမ်း ၂၅၀ ကျော်ကိုချန်လှပ်ထားသည်
၎င်းသည်အချိန်အတန်ကြာပွင့်လင်းသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ GoPro သည် ...
por Ruben Gallardo လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
အမေဇုံကသူရဲ့ package များ၏ပို့လွှတ်မှုစနစ်ကိုတော်လှန်လိုသည်။ ဘယ်သူကမှတဆင့်လုပ်ချင်တယ် ...
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုတွင် ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။
Davos World Economic Photo ကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များမှကာကွယ်ပေးသည်
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
Parrot Swing ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ တစ်ဝက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်ဝက် RC လေယာဉ်ဖြစ်သည်
por Miguel Gaton လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
ဤအချိန်တွင် Parrot Swing ကိုထုတ်လုပ်သူ Parrot မှ minidrone အသစ်၏ဆန်းစစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။
Microdrone Smartview VR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
por Miguel Gaton လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
ဒီနေ့ Parrot မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bebop2ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရှိဆုံးကတော့မင်းကိုစကားပြောစေတယ်။
Hexadrone skyview wifi, အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အကယ်၍ သင်သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထက်သန်ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Hexadrone skyview wifi၊